नीति तथा कार्यक्रम भाङ खाएर लेखेको हो ? | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ बैशाख २२ गते प्रकाशित, l १३:४८
काठमाडौं, २२ बैशाख । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले संविधानमा विमति नरहेको भन्ने सरकारको भनाइ प्रति आपत्ति जनाएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले नीति तथा कार्यक्रममा ‘अब संविधानप्रति बिमति नरहेको’ भनी लेखिएकोमा आपत्ति र असहमति जनाएका हुन्।
संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वामित्वमा विमति नरहेको भन्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित ७ नम्बर बुँदाप्रति उनले आपत्ति जनाए।उनले संविधानप्रति आफूहरुको गम्भीर विमति रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘किन विमति छैन? यो कहिलेदेखि विमति भएन? कसले लेख्योे नीति कार्यक्रम? आधा निन्द्रामा लेख्या हो? पचासौ पटक यो हाउसमा हामीले नै विमति देखाएको हो।’
संविधानप्रति व्यापक असन्तुष्टी रहेको र विमति रहेको स्पष्ट हुँदा हुदै संविधानप्रति अब विमति छैन भनेर लेखिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। ‘यसबाट संविधान नै संशोधन नगर्ने मनस्थितिका सरकार छ भन्ने सन्देश दिइएको छ। त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘भाङ खाएर नीति तथा कार्यक्रम लेखेको हो र?’
उनले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य रहेको भन्दै सरकारले संशोधनलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘जब–जब बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत संविधानलाई बनाइन्छ, त्यो संविधान गइजान्छ। बाईबाई भइजान्छ।’ उनले सरकारले जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको आरोप लगाए।
‘नीति तथा कार्यक्रम झुटको खेती जस्तै छ। सफेद झुट जस्तै,’ उनले भने, ‘जनताको अधिकार माथि दिन दहाडै डकैती गर्ने, जनतालाई ढांट्ने, जनतालाई गुमराह गर्ने?’ उनले शाही सम्बोधनको शैलीमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरे।